အဘယ်သို့ငါခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်? | ဒုက္ခသည်စင်တာမှအွန်လိုင်းကနေသတင်းအချက်အလက် | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
ဓာတ်ပုံ: Hector ဆေးလ်ဗား - အကောက်ခွန်နှင့်နယ်စပ်ရေးရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
How do I apply for asylum? This page has information to help you learn how to apply for asylum.
သငျသညျလုံခြုံစွာသင့်အိမ်တိုင်းပြည်သို့ပြန်လာလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ဖြစ်ပါသည်. သူတို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကြောင့်မှညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်ခံစားခဲ့ကြရသည်ဖြစ်သောကြောင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလူပေါင်းကာကွယ်မှုရှာကြံ United States ကိုလာ: လူမျိုး, ဘာသာ, အမျိုးသား, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်လူမှုရေးအုပ်စုတွင်အဖွဲ့ဝင်, သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးအမြင်.
Asylum is when you receive protection from the United States government because you cannot safely return to your home country. Every year people come to the United States seeking protection because they have suffered persecution or fear that they will suffer persecution due to: Race, Religion, Nationality, Membership inaparticular social group, or political opinion.
ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားရန်, သငျသညျလျှောက်ထားတဲ့အခါသင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. သငျသညျအမရေိကနျပွညျထောငျစုရိုက်ထည့်ရန်ခိုင်လုံသောဗီဇာသို့မဟုတ်လမ်းနှင့်အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ရောက်ရှိပါလျှင်, သငျသညျအမရေိကနျပွညျထောငျစုရိုက်ထည့်ပါပြီးရင်သင့်ရဲ့နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်လွှာတင်သွင်းနိုင်ပါတယ်. အချိန်အများစုမှာ, သငျသညျအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောက်ရှိ၏တစ်နှစ်အတွင်းနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားရပါမည်, သငျသညျတခုကင်းလွတ်ခွင့်တောင်းခံနိုင်ပါတယ်ပေမယ့်.
အဆိုပါ Trump အုပ်ချုပ်ရေးလက်ရှိတွင်နိုင်ငံတကာဥပဒေခြိုးဖောကျနှင့်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံအမေရိကန်ဝင်ခွင့်ပြုမထားဘူး. အားလုံးခိုလှုံခွင့်တောင်းခံစခန်းများတွင်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာများတွင်ကျင်းပလျက်ရှိသည်. ကလေးများဝေးသူတို့ရဲ့မိဘများထံမှခေါ်ဆောင်သွားပြီ. အမေရိကန်နယ်စပ်တလျှောက်တွင်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမှုအတွက်သစ်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Read.
The Trump administration is currently breaking international law and not allowing asylum seekers to enter the US. All asylum seekers are being held in camps or detention centers. Children have been taken away from their parents. Read more information about the new rules for asylum seekers on the US border.
US မှာခိုလှုံခွင့်ရဖို့နိုင်ရန်အတွက်, သင်သက်သေပြနိုင်ဖို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါကသင်သည်ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုသို့မဟုတ်စော်ကားခဲ့ကြသည်သင်၏အမှုကိုကူညီပေးပါ, နှင့်သင့်အစိုးရသင်သည်ကာကွယ်ပေးမပြုခဲ့ကြောင်း. သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်နိုင်စေဖို့သင့်ရဲ့နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ကိစ္စတွင်အနိုင်ရဖို့ရှိသည်ပိုကောင်းခွင့်အလမ်းရှိသည်ပိုမိုသက်သေအထောက်အထား. အစဉ်အမြဲအမှန်တရားပြောပြရန်သေချာပါစေ, မဟုတ်ရင်သင်ချက်ချင်းသင့်အမှုငြင်းပယ်နိုင်. သင်တို့သည်လည်းအသေးစိတ်အကြောင်းကိုအလွန်တိကျတဲ့ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. ဖြစ်ပျက်အတိအကျဘာကိုသတိရအချိန်ဖြုန်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်, အတိအကျရက်စွဲပေါ်တွင်. သင်တစ်ဦးအမှားလုပ်လိုလျှင်, အစိုးရကသင်လဲလျောင်းနေကြသည်ထင်စေခြင်းငှါ.
In order to get asylum in the US, it helps your case if you have evidence to prove you were persecuted or abused, and that your government did not protect you. The more evidence you have the better chance you have to win your asylum case to be able to stay in the United States. Be sure to always tell the truth, otherwise you could immediately have your case denied. You also need to be very specific about the details. It is important to spend time remembering exactly what happened, on the exact date. If you makeamistake, the government may think you are lying.
အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ (i.e. သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, မွေးစာရင်း, ကျောင်းသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်, အိမ်သူအိမ်သား registry ကို, အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကဒ်, သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့ဝင်ကဒ်။)
ပညာရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ (i.e. ကျောင်းကမှတ်တမ်းများ, လက်မှတ်များ, နှင့်ဒီပလိုမာ)
မဆိုမူကြမ်းခိုလှုံခွင့် applications များသို့မဟုတ် ကြှမျးကိနျြဆိုထှကျခကျြ သင်ဖန်တီးထားသောကြစေခြင်းငှါ
သင်သင့်အိမ်တိုင်းပြည်ပြေးသောအခါသင်နှင့်အတူဤစာရွက်စာတမ်းများယူဆောင်လာနိုင်ခဲ့ကြဘူးဆိုပါက, ကြောင်းအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်. သငျသညျစာရွက်စာတမ်းများမရှိဘဲသင်၏ခိုလှုံခွင့်ကိစ္စတွင်သက်သေအကြောင်းကိုဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိနောက်ပိုင်းတွင်ပိုမိုဖတျရှုနိုငျပါသညျ.
More resources on how to apply for asylum
Asylum in the United States, Wikihow
ကိုဖတ်ရှုဖို့လွယ်ကူပါတယ်, အဆိုပါခိုလှုံခွင့်လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပြင်ဆင်နေအပေါ်သတင်းအချက်အလက်အများကြီးနှင့်အတူခြေလှမ်း-by-step ရှင်းပြချက်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှု Pro ကို-Bono ဥပဒေရေးရာအရင်းအမြစ်နှင့်နောက်ထပ်အကူအညီ သင့်ရဲ့အမှုအဘို့အပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့မှစာမျက်နှာ.
Visit our Pro-Bono Legal Resources and Additional Help page to find someone who can offer professional advice for your case.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှု & လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများ: နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်လွှာ
အဆိုပါခိုလှုံခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့. ခိုလှုံခွင့်များအတွက်ငါ-589 လျှောက်လွှာ View နှင့်ဖယ်ရှားရေး၏နှိမ်. လျှောက်လွှာကိုလေ့လာ. သင့်အနေဖြင့် United States ကိုရောက်ရှိလာ၏တစ်နှစ်အတွင်းကဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
လာမယ့်ဘာလုပ်ရမှန်းသေချာသင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု / မက္ကဆီကိုနယ်စပ်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ်ဖြစ်ကြပြီးမဟုတ်? သငျသညျအမိုးအကာရှာဖွေနေကြသည်, ဥပဒေရေးရာပံ့ပိုးမှု, အစာ, နှင့်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ဟုဆိုကာကူညီ? သငျသညျအောကျ Are 18? အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာမှအွန်လိုင်းကိုသင်အခြေခံလိုအပ်ချက်များနှင့်အသင့်အမှုအတှကျအကွံဉာဏျနှင့်အတူများကိုကူညီရန်နိုင်မည်အကြောင်းအချို့အရင်းအမြစ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအပေါ်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းထားသည်.
Are you on either side of the United States/Mexico Border and not sure what to do next? Are you looking for shelter, legal support, food, and help with claiming asylum? Are you under 18? The Refugee Center Online has collected some resources and information on organizations that may be able to help provide you with basic necessities and advice for your case.
ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမှုအတွက် UNHCR ကသတင်းအချက်အလက်
ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားဖို့ဘယ်လို ပတ်သက်. ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR စာမျက်နှာများကိုအင်္ဂလိပ်လိုရှိပါသည်, ပြင်သစ်, စပိန်နှင့် Arabic အဘိဓါန်.
Video: Mock asylum interview
A lawyer pretends to be an asylum officer and asks questions that would normally be asked to you during an interview. This will help you prepare your own answers to the questions they will ask you.
ဤဗီဒီယိုအားတစ်ဦးခိုလှုံခွင့်ကိစ္စတွင်အနိုင်ရဖို့ဘယ်လိုအကြောင်း, သင်ထိခိုကျခဲ့အထောက်အထားရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသော်လည်း. သင်သည်သင်၏တိုင်းပြည်အတွက်အန္တရာယ်များတဲ့ပုံစံသို့မဟုတ်အလေ့အကျင့်ရှိကွောငျးတငျပွနိုငျလျှင်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်.
This video is about how to win an asylum case, even though you don’t have proof that you were harmed. It can be done if you can demonstrate that there isapattern or practice of harm in your country.
ဗီဒီယိုကို: ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထား - သင့်ကိစ္စတွင်အနိုင်ရ
Video: Applying for asylum – winning your case
ဟောင်းများလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်သဘာဝန်ဆောင်မှုရှေ့နေချုပ်, သူ Carl Shusterman, သငျသညျသတိထားပြင်ဆင်မှုအားဖြင့်သင်တို့၏နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ကိစ္စတွင်အနိုင်ရနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုဆွေးနွေးပွဲ.
Former Immigration and Naturalization Service Attorney, Carl Shusterman, talks about how you can win your asylum case through careful preparation.
Video: Several ways an asylum case can be made in the US
More information about how you could apply and qualify for asylum in the United States.
ခိုလှုံခွင့်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ, ဖယ်ရှားရေး၏အခွန်ရှောင်, ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဆန့်ကျင်ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်း, ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားမှုအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်, လူဝင်မှုထိန်းသိမ်းရေးရှိနေစဉ်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရှာမည်သို့မည်ပုံ, အထူးလူဝင်မှုလူငယ် status ကို, နှင့်ယာယီကာကွယ်ထား status ကို.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Check အဘယ်မှာရှိဥပဒေရေးရာအရင်းအမြစ်များကိုတွေ့ရှိရန် သင့်အမှုပေါ်တွင်သင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန်မှုနှင့်အကြံပေးချက်ကိုပူဇော်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့မှစာမျက်နှာ.
Check our Where to find legal resources page to find someone who can offer you professional guidance and advice on your case.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်, လူ့အခွင့်အရေးပထမဦးစွာ. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝင်များနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းလက်ခံရရှိရန်တစ်ဦးထက်ပိုလမ်းရှိပါတယ်. ဤပုံသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့တစ်ခုချင်းစီကိုလမ်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်မည်မျှပြသ. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့အချို့သောနည်းလမ်းများလူဝင်မှုထိန်းသိမ်းရေးပါဝင်သည်လိမ့်မည်ဟုသတိထားမိ.
Asylum in the United States, Human Rights First. There is more than one way to enter the United States and receive relief. This image shows how each way into the United States isadifferent process. Notice that some ways into the United States will include immigrant detention.
အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားများအတွက်အဖမ်းခံထားရပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူအဘို့သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးလက်စွဲကိုသိရ (eng, span, အဘိဓါန် Arabic, ပြင်သစ်, ဒူ, အဘိဓါန် Mandarin-, ဆိုမာလီ, ဟိန်ဒီ, ပနျခြာပီ)
ဤ လက်စွဲ U.S အောက်မှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတို့၏အခွင့်အရေးကိုတစ်ဦးနားလည်မှုပေးဖို့အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကာလအတွင်းဥပဒ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ်သူတို့အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနတို့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေကြပါလျှင်. ဤအလက်စွဲအတွက်သတင်းအချက်အလက်ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမဖြစ်သင့်, နှင့်ထိန်းသိမ်းခံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်၎င်းတို့၏ချစ်ရသူရှာအားပေးခဲ့ကြသည် ကျွမ်းကျင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောင်းရွှေ့လာသောလူ Justice Center ကိုသို့မဟုတ်အခြားအနေဖြင့်ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကို ယုံကြည် အဖှဲ့အစညျး.
ဖယ်ရှားရေးတရားစွဲဆိုမှု၌ရှိကြ၏သို့သော်ရှေ့နေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသူကိုခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမှုအတွက် Options ကို
Options for Asylum Seekers who are in removal proceedings but do not have an attorney
“ကျွန်မပြန်လှည့်သွားဝံ့ဘူး:” ခိုလှုံခွင့်ပေးဖို့တစ်ဦးကလမ်းညွှန်, ဖယ်ရှားရေး၏ withholding, ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း
“I’m Afraid to Go Back:” A Guide to Asylum, Withholding of Removal, and the Convention Against Torture
ဖယ်ရှားရေးတရားစွဲဆိုမှု၌နေသော Pro ကို Se ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမှုအတွက်အရင်းအမြစ်များ
Resources for Pro Se Asylum Seekers who are in removal proceedings
သင့်ရဲ့ဖယ်ရှားရေးသို့မဟုတ်ပြည်နှင်ဒဏ်အဘို့အထုတ်ပြန်ထားသောအမိန့်ရှိဖူးပြီဆိုရင်, သင်ဆဲနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားများအတွက်အခွင့်အလမ်းများ, သင်တစ်ဦးရှေ့နေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်. ဤတွင်ရှေ့နေမပါဘဲနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တစ်ခုကိုဖြည့်အချို့လမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်ကြသည်.
အစစ်အမှန်ရှေ့နေများမဟုတ်သောလူစုထဲကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဤအချက်အလက် Read! သူတို့သည်သင်၏ပိုက်ဆံစောင့်ရှောက်နိုင်အောင်သင်ကူညီဟန်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်သူတွေကိုရှိပါတယ်. သူတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ!
Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself!
အဆိုပါ LGBTQ အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်သတင်းအချက်အလက်
သင်၏အခငြ့်အရေး LGBTQ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသိကြ (အင်္ဂလိပ်)
သူတို့လိင်တူချစ်သူကြောင့်တစ်ဦးကစာရွက်စာတမ်းသူတို့ရဲ့နေအိမ်နိုင်ငံများသို့ပြန်သွားဖို့ကြောက်လန့်နေသောလူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုးသို့မဟုတ်လိင် (လိင်တူချစ်သူ) နှင့် / သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ HIV အခြေအနေကိုကြောင့်. သင်သင့်အိမ်နိုင်ငံသို့ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးပါကသငျသညျထိခိုကျသို့မဟုတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရလိမျ့မညျကိုကွောကျရှံ့လျှင်သင်ပြည်နှင်ဒဏ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ကာကွယ်ရေးရှိစေခြင်းငှါ. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောင်းရွှေ့လာသောလူ Justice Center ကိုဥပဒေရေးရာအကြံပေးများကိုဥပဒေရေးရာရည်ညွှန်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်. သငျသညျက၎င်း၏သေဆုံးသူအခမဲ့အရေအတွက်ကိုမှာအမျိုးသားပြောင်းရွှေ့လာသောလူ Justice Center ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်: (312) 263-0901.
သင်၏အခငြ့်အရေး LGBTQ ကိုသိရ (Español)
Know Your Rights LGBTQ (Español)
သင်၏အခငြ့်အရေး LGBTQ ကိုသိရ (ပြင်သစ်)
သင်၏အခငြ့်အရေး LGBTQ ကိုသိရ (အဘိဓါန် Arabic)
ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်း / အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထား: ကူညီဖြစ်စဉ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ
ခိုလှုံခွင့်ရှာဖွေသူအိမ်ရာ Network ကို
ASHN ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံများအတွက်အမိုးအကာနှင့်လူမှုရေးထောက်ခံမှုပေးကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်. ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်၎င်းတို့၏နေအိမ်များအတွက်အခန်းတခန်းဖွင့်လှစ်သူအ Baltimore နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အုပ်စုတစ်စုအိမ်သူအိမ်သားများပါဝင်သည်. ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်နှင့်ပိုမိုကြီးမား ASHN အသိုင်းအဝိုင်းဖောက်သည်လူမှုရေးထောက်ခံမှုပေး.
Asylee အမျိုးသမီးများနေ့လုပ်ငန်း (ကွောကျရှံ့)
လျ: 443-850-0627. ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံနှင့် asylees ရန်ပွားအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်အများအပြားန်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်, ကိစ္စတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုအပါအဝင်, အလုပ်အကိုင်လေ့ကျင့်ရေး, အင်္ဂလိပ်အတန်း, ကျန်းမာခြင်းနှင့်အစာအာဟာရပရိုဂရမ်းမင်းတနင်္လာနေ့-ကြာသပတေးနေ့. ထို့အပြင်, ကွောကျရှံ့ခိုလှုံခွင့်ရှာကြံမိန်းမတို့အားသငြ်ကူးေူပာင်းမြအိုးအိမ်ကိုထောက်ပံ့ပေး. ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာ: Baltimore
လူ့အခွင့်အရေး first ကို
သူတို့ရဲ့လိုလား Bono ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားပြုမှုအစီအစဉ်ကိုအကူအညီလိုသူကိုခိုလှုံခွင့်-ရှာဖွေသူများနှင့်အတူကောငျးမှရှေ့နေများကကိုက်ညီနှင့်မဟုတ်ရင်အရည်အသွေးမြင့်ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားပြုမှုမတတ်နိုင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်.
လျ: 410-230-2700. ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်ဒုက္ခသည်ထောက်ခံအားပေးမှုနှင့် U.S အတွက်များစွာသောအခြားအုပ်စုများနှင့်အတူအလုပ်လုပ် programming ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖှဲ့အစညျး. သူတို့ကဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့်ရပ်ရွာပေါင်းစည်းမှုအာရုံစိုက်, ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမှုအတွက်ထိန်းသိမ်းရေးမှအခြားရွေးချယ်စရာ, မပါဘဲရွှေ့ပြောင်းလူငယ်များအတွက်မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးနှင့်မွေးစားစောင့်ရှောက်မှု. ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာ: တစ်နိုင်ငံလုံး.
လျ: 1-888-373-7888 BeFree ဖို့ဒါမှမဟုတ်စာသားကို "အကူအညီ" သို့မဟုတ် "INFO" (233733). တစ်ဦးကအမျိုးသားရေး, လူကုန်ကူးခံရသူဆက်သွယ်သေဆုံးသူ-အခမဲ့ hotline, ပညာရှင်များ, သတင်းအချက်အလက်နှင့်ရည်ညွှန်းဖို့နှင့်ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်, အဖြစ်သင်တန်းနှင့်နည်းပညာပိုင်းအကူအညီအတွက်အရင်းအမြစ်များကို. ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာ: တစ်နိုင်ငံလုံး.
အနောက်မြောက်ပြောင်းရွှေ့လာသောလူအခွင့်အရေးစီမံကိန်းအသိုင်းအဝိုင်းပညာရေးအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်း, သက်ရောက်မှုတရား, တိုက်ရိုက်ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများ, အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူနှင့်အခြားရာဇဝတ်မှုများထောက်ခံ, မှီခိုရာအဆောက်အဉီး, မိသားစုန်ဆောင်မှုများ, ကလေးမြားအတှကျထောကျပံ့ & လူငယ်, နိုင်ငံသားအဖြစ်, ရွှေ့ဆိုင်းလှုပ်ရှားမှု & IF, နှင့်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပြည်နှင်ဒဏ်ကာကွယ်ရေး.
ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမှုအတွက် Pro ကို-Bono ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ပေးဖို့က World Wide Access ကို, နိုင်ငံအားဖြင့်
World Wide Access to Pro-Bono Legal Advice for Asylum Seekers, By Country
This page shows the free or reduced priced legal services available in countries all over the world. See if your country has free legal services near you!
လည်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပြီး အဘယ်မှာရှိဥပဒေရေးရာအရင်းအမြစ်များကိုတွေ့ရှိရန် သင့်အမှုပေါ်တွင်သင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန်မှုနှင့်အကြံပေးချက်ကိုပူဇော်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့မှစာမျက်နှာ.
Also, please check our Where to find legal resources page to find someone who can offer you professional guidance and advice on your case.